Best Music Abaabulaha
Waxaad isticmaali kartaa arjiga abaabulka music ah si aad u nadiifiso oo ku kala soocaan aad music maktabadda weyn, taas oo haddii gacanta lagu sameeyey noqon lahaa waqti lumis ah iyo hab-daal. Maqaalkani waxa uu ka hadlayaa oo is barbar dhigay qaar ka mid ah qaban qaabiyaasha music wanaagsan ee dhufto ee Windows iyo OS X Mac.
Part I: Best Music Abaabulaha Lugood - Wondershare TunesGo
Qaybta II: Best Music Abaabulaha Windows iyo Mac OS X
Part I: Best Music Abaabulaha Lugood - TunesGo Wondershare
Mid ka mid ah qaban qaabiyaasha music ugu wanaagsan ee la heli karo ilaa taariikhda qalabka Apple waa TunesGo Wondershare . Codsiga ayaa helay ratings xiddiga ugu sareeya ka users dhamaadka ka mid ah tartanka badan. Version ugu dambaysay ee software-ka waa 4.6.10 oo uu leeyahay horumarka ee Kacaanka oo badan marka loo eego version wayn. In kasta oo ay tahay codsi ka bixisay, tayada adeegyada ay bixiyaan barnaamij ah oo qiimihiisu yahay qiimaha ay. Wondershare TunesGo waxaa si joogto ah la casriyeeyay ay ku dhiirigelinayaan in uu in mid ka mid ah qaban qaabiyaasha music ugu horumarsan ka dhigaa. Inkasta oo software ah ee la heli karo madal Windows sidoo, waxa ugu fiican ee la shaqeeya qalabka Apple, sida loogu Mac OS X iyo macruufka.
Wondershare TunesGo gelineya inaad si ay u qabtaan hawlo badan oo si fiican u abaabuli karaan maktabadda music aad, qaar ka mid ah taas oo aan la gaari karaa xitaa iyadoo la isticmaalayo Lugood. Codsiga waa anfacaya oo kuu oggolaanaysa in aad wareejiso xogta ka mid ah qalabka Apple aad by Lugood gebi ahaanba Goldogob ee geedi socodka.
Faa'iidada: • oo dhan muuqaalada codsiga si fudud loo heli karaa iyada oo loo marayo interface nadiif ah oo muuqaal ahaan u xoojinaya.
• Waxaad xidhan karto iyo wareejiyo xogta ka mid ah qalabka Apple badan waqti isku mid ah taas oo yaraynaysa hawsha eheeyn of loading xogta si aad u computer hore . Tani aad bay u streamlines hanaanka wareejinta xogta.
• software ayaa aad u saamaxaaya in ay badalo files music iyo video galay Apple taageeray qaabab.
• Isticmaalka codsigan, waxaad tirtiri kartaa files nuqul ka maktabadda si fudud oo waxtar leh.
• The feature dareen leh ee loo dhisay ka mid ah software si toos ah wuxuu diyaariyaa warbixin ku tahay album macluumaad, album oo tag.
• Iyadoo codsigan, waad kala qaybsan kartaan music iyo videos dhexeeya iCloud (iibsaday ah ID kala duwan Apple) iyo maktabadda Lugood.
• Taageerada 24/7 ay bixisay kooxda farsamada ee Wondershare ee kaa caawin kara via chat live ay dhacdo in aad qabto wax arimo ah marka aad isticmaalayso software ah.
A xisaabaya barbardhigo u dhexeeya 6-qaabiyayaasha music wanaagsan ee xagga hoose si ay u fududaynaysaa in aad dooratid mid ka mid ah taas oo ku haboon baahidaada. Sharaxaad faahfaahsan oo mid kasta oo ka mid ah qaban qaabiyaasha ayaa sheegay in la siiyo miiska ka dib.
Feature \_ Name 1. Tuneup Media 2. Foobar2000 3. MusicBee 4. MediaMonkey 5. Rinse My Music 6. MusicBrainz Piccard
Taageerayaan nidaamka qalliinka (s) Windows, Mac, iyo macruufka Windows Windows Mac OS X, iyo Windows Mac OS X Mac OS X, Windows, Linux
Price Version maxkamad Bilaashka ah ee Windows. Version mushaarka loogu Apple kharash $31.99. Waa freeware ah Waa freeware xadidaad ah. version maxkamad ree heli karo. Qalabayn karaa 'dahab' version ee $ 20 Waxa laga iibsan karaa $39.99 Waa freeware ah.
Qiimeynta Star (out of 5 stars) 5 stars 4 xiddigood 4 xiddigood 4 xiddigood 4 xiddigood 5 stars
Features sharafta • Kuu ogolaanayaa inaad abaabulo maktabadda music aad.
• 'DeDuper' feature kuu ogolaanaysaa inaad tirtirto faylasha nuqul.
• 'Tuniverse' wax yaabahan smart ee codsiga • Soo la interface fudud oo nadiif ah.
• feature loo maqli Gapless aad u saamaxaaya in ay ku ciyaaraan files audio oo aan la dhexgelin. • Kuu ogolaanayaa inaad dajiyaan files audio ka Lugood iyo Windows Media Player.
• Yimaado la interface ah fududeeyey oo si sahlan loo isticmaalo. • Miyuu interface gebi customizable.
• Muuqaal dareen leh si toos ah wuxuu diyaariyaa warbixin ku metadata maqan. • Si toos ah ku darayaa maqan tahay album in aad maktabadda.
• Kuu ogolaanayaa inaad tirtirto faylasha nuqul oo wuxuu oofin ah 'tirtirka imtixaanka si loo xaqiijiyo in faylasha saxda ah la tirtiro lahaa. • Easy in ay isticmaalaan iyo interface nadiif ah ka dhigaysa in ay u sahlan tahay bilowga ah.
• Si toos ah wuxuu diyaariyaa iyo go'aansan maktabadda music aad.
• Taageerada tiro balaadhan oo ah qaabab file.
taageerayaan Operating System: Windows iyo Mac About: TuneUp Media waa fudud fur-in oo ku qasban tahay inay leedahay codsiga Saaxiibkiis marka ay timaado nadaafada iyo abaabulka maktabadda music aad. Laydinku hodansiin leh smart gaar ah in loo sameeyo codsiga mid ka mid ah qaban qaabiyaasha music ugu fiican, barnaamijka helo xidiga ka mid ah tartanka kala duwan rating ugu sareeya. Software ee Kacaanka oo la beddelo nidaamka oo dhan lagu maareeyo, abaabulka iyo ogaadeen ururinta music digital.
. • Muujinta The smart ee codsiga loo yaqaan 'Tuniverse' bixisaa fursadaha helitaanka miyuusik u gaar ah sida deegaanka, shakhsi qaylodhaan riwaayad, iyo helitaanka daayo music cusub sida aad proclivity ku sifayn
• feature 'DeDuper' The of software gelineya inaad wax ku ool ah ka soo saarto nuqul files adigoo isticmaalaya sare technology faraha loomana baahno.
• Codsiga waxaa si toos ah u tilmaamaysaa oo wuxuu diyaariyaa files warbaahinta aad dhaqso ah oo hufan.
• Tan ma aha software ah standalone laakiin ah ka siib-in, waxa ay kor u shaqeynayaan of pre-rakibay Lugood iyo Windows Media Player . Qasaaraha: . • The version maxkamad awood u lacag la'aan ah si aad u hagaajin oo kaliya ilaa 50 kuwan raadkaygay • Muuqaaladan sare, had iyo jeer, noqdeen kuwo si ay u isticmaalaan bilowga ah.
taageerayaan Operating System: Windows About: Foobar2000 waa freeware xadidaad shaqeeya sida software ah standalone u qalab aad. Updates joogtada ah ee codsiga waxaa bixiya ku dhiirigelinayaan in uu. Version ugu danbeeyay la Timaadda optimizations qaab generic in laguu suurogeliyo in aad abaabulo tiro badan ee files audio ee maktabadda si hufan.
• Marka la barbardhigo qabanqaabiyayaasha music kale in la iman interface adag, Foobar2000 ayaa interface ka minimalistic oo fudud ula shaqeynayaan si wanaagsan.
• software ayaa leh dhisay-in ciyaaryahanka music taageera dhamaan qaabab file maqal ah a.
• The feature loo maqli gapless in Foobar ayaa kuu ogolaanaya in aad u ciyaaro aad audio files oo aan wax dib u dhac / go '.
• Tani waa mid ka mid ah qaban qaabiyaasha music ugu dhaqsiyaha badan oo ugu wejiyo wada qaadan kartaa tiro badan oo ah files audio fudayd.
• Codsiga waxaa la Timaadda interface gebi customizable.
• Foobar2000 kale oo uu leeyahay nidaam fur-in ku par la Firefox. Qasaaraha: . • Codsiga ayaa qalooca uga yaacday ilaa waxbarasho oo u baahan dhexdhexaad ah xirfadaha kombiyuutarka sare ka dhigaya ku adag tahay in ay isticmaalaan bilowga ah • Ma jiro Help Forum for software si aad ayaa kuu gaar ah marka ay timaado in la fahmo feature gaar ah. • Ma jiro dhisay-in video ciyaaryahan oo sidaas daraaddeed waxaad ka ciyaari kartaa oo abaabulo ka files audio oo kaliya in aad maktabadda.
taageerayaan Operating System: Windows About: MusicBee waa qalab wax ku ool ah in uu abaabulo, ka raadin iyo ciyaaro files music on kombiyuutarada aad desktop ama kumbiyuutarada laptop. Marka la barbardhigo tartamaya kale, MusicBee waa freeware ah oo ay ku jiraan oo dhan muuqaalada aasaasiga ah iyo kuwa sare ah qabanqaabiyaha music hufan. Isticmaalka codsigan, si fudud ayaad u habayn kartaa maktabadda music aad. Software wuxuu isticmaalaa Bass Library Audio.
• MusicBee waa freeware xadidaad ah in ay maamushaa sida software ah standalone on qalab aad.
• Codsiga waxaa la Timaadda interface cad iyo dareen leh in streamlines habka abaabulka maktabadda music aad.
• MusicBee si toos ah u aragto oo wuxuu diyaariyaa metadata maqan warbaahinta aad files baadhi macluumaadka ka database-online.
• Ciyaaryahanka music sare ka yimaadaa la feature ah gapless loo maqli karo oo awood aad u ciyaaro files audio oo aan la dhexgelin.
• Waxaad soo dhoofsadaan karo files warbaahinta ka maktabadda Lugood iyo Windows Media Player isticmaalaya MusicBee.
• Software kuu ogolaanaya in aad ku haboon aad habayso audio files galay fayl ku saleysan qiyamka tag sida album, magaca, sifayn, iwm Qasaaraha: . • uusan Codsiga ciyaaryahan video dhisay-in aan • MusicBee uu soo bixi sida file .ZIP ah oo, had iyo jeer, waxay abuurtaa arrimaha marka rakibaadda. • tirada badan ee ka mid ah goobaha ay noqdaan eheeyn bilowga.
taageerayaan Operating System: Mac OS X iyo Windows About: Haddii aad rabto in aad isticmaasho software ah standalone loo abaabulo oo loo maamuli lahayd music maktabadda weyn, MediaMonkey waa mid ka mid ah qaban qaabiyaasha music fiican in la sameeyo wixii kaloo ka. Codsiga waxaa si buuxda u midaysan ciyaaryahan music, qabanqaabiyaha, iyo encoder ah oo awood aad u ciyaaro files audio ka mid ah qaabab file maqal ah oo dhan loo jecel yahay. Dhiirigelinayaan in uu si joogto ah u cusboonaynta software ah ee ay ka shaqeynayaan habboon iyo koobaa. Version ugu dambeeyay waa 4.1.6 iyo in ka badan 40 Tilmaamo la casriyeeyay oo ay ku jiraan .Wadashaqayntaas fiican qalabka Android.
. • Waxaad si fudud u maarayn karaan kumanaan files music iyo video aan bogging hoos your computer
• Muujinta The dareen leh ee arjiga si toos ah wuxuu diyaariyaa iyo Tags metadata oo ka mid ah files audio.
• software The kuu ogolaanayaa inaad si ay u abuuraan oo ay u maareeyaan playlists kartoo.
• interface ayaa customizable ka dhigaysa mid soo jiidasho leh oo si sahlan ay u isticmaalaan.
• Inta badan idaacadaha geeyo ee waxaa taageera codsiga. Qasaaraha: • Suuqa ayaa browser ee software-ka bixisaa fursadaha xadidan. • MediaMonkey ma bixiso podcasts.
taageerayaan Operating System: Mac OS X (version 10.5 ama ka dib) About: raaci My Music waa software-saddexaad iyo codsiga Adobe Air in ballan loo abaabulo oo loo soo celin maktabadda Lugood weyn si hufan. Tani waa qalab nadiifinta iswada in uu xalinayo aad arrimaha ururada Lugood si deg deg ah oo wax ku ool ah. Version ugu dambaysay ee Rinse My Music yimaado leh toolbar optional Lugood kuu ogolaanaya inaad u bilowdo oo aad marin u codsiga ka gudahood Lugood laftiisa. In kasta oo ay tahay codsi ka bixisay, waxaa haboon qiimaha ee $ 39.99 (waqtiga qoraalkan) haddii aad leedahay ururinta weyn oo muusiko ah maktabadda Lugood aad.
. • raaci My Music toos ah ku darayaa farshaxanka album xal sare si aad audio files samaynta maktabadda oo dhan soo jiidasho iyo muuqaal wacan yahay
. • software The kuu ogolaanayaa inaad si ay u abuuraan playlists kartoo maktabadda Lugood aad sida ay ku sifayn ee files audio
• Tani waa barnaamij smart in aanu ku tiirsan yihiin in wararka ay soo aad files warbaahinta ururka ee maktabadda. Hase yeeshee, waxa la Timaadda database badan oo ka taas oo la is barbar dhigay aad songs in ay macluumaadka ku kaydsan u gaar ah.
• Codsiga waxaa si toos ah wuxuu diyaariyaa warbixin ku maqan tag ah ee files warbaahinta.
• Isticmaalka raaci My Music aad si fiican u saari kara faylasha nuqul ka maktabadda Lugood aad . Waa maxay waxa ay taasi ka wanaagsan in qabanqaabiyayaasha kale music waa in aad qaban karto tirtirka tijaabo si aan u hubsado in songs sax ah laga saaray waqtiga kama dambaysta ah ka saarida. Qasaaraha: • raaci My Music waa codsi bixisay. The version maxkamad free kuu ogolaanaya inaad si ay u qabanqaabiyaan kaliya 50 files audio maktabadda Lugood aad. • Golaha Help ee software-ka aan la kala oo faah taas oo dhibaato kuwa la kulanaa arrimaha la xiriira ay ku shaqaynayaan.
taageerayaan Operating System: . Mac OS X, Windows, iyo Linux About: MusicBrainz Piccard waa MusicBrainz tagger iyo music qabanqaabiyaha rasmi ah oo ku qoran luqad barnaamijyada Python. Inkasta oo tani waa codsiga socon cross-boosteejo ah, waxa ugu wanaagsan ee la shaqeeyaa ay madal Mac OS X. Muuqaaladan sare ayaa lagu bilaabaa in nooca ugu dambeeya la ujeeddo ah in ay qabanqaabiyaha music jiilka soo socda u MusicBrainz sameeyo. Maxaa ka dhigay waxa ay ka fiican tahay tartanka waa in nooca ugu dambeeya uu diiradda saarayaa tagging album-u janjeedha sida soo horjeeda si ay ula socdaan wacyi tagging in ay jirto in version hore 'Classic'. Habkan wuxuu kuu ogolaanayaa inaad u xalliso files ee album gaar tagay kuwa aan la rabin.
. • technology faraha loomana baahno in loo isticmaalo software si toos ah wuxuu diyaariyaa iyo badalay macluumaadka maqan tag ah ee files audio
• interface nadiif ah oo fududeeyey of software awood u xataa users khibrad yar in ay wadaan codsiga si karti leh oo si fudud.
• MusicBrainz Piccard taageertaa tiro balaadhan oo ah qaabab file iyo sidoo kale kuu ogolaanayaa inaad si loo soo dajiyo plugins dheeraad ah.
• Codsiga waxaa la Timaadda ah search engine dhisay-in, sidaas aad suuragelinayo in la helo tiro balaadhan oo ah files audio si fudud. Qasaaraha: • isticmaala qaarkood ayaa muujiyey sida ay welwel ka qabtaan arrimaha ammaanka iyo asturnaan baaritaano software iyo rummages dhex drive oo dhan si toos ah u adag. • Forum Help ee MusicBrainz ma aha Eebaha Raxmaana.
Afeef: Codsiyada software tilmaamay waxaa loo arkaa kuwa ugu wanaagsan ee ku salaysan celcelis ratings user keliya. Waxaa jira digtoonaanta lahayn iyo xukun ay bixiyaan qoraaga ama goobta wax alla wixii.
> Resource > Music > Best Music Abaabulaha Lugood / Windows iyo Mac OS X